DEG-DEG: Kooxdii 1aad Ee Usoo Dallacday Premier League Xilli Ciyaareedka Dambe, Laba La Sugayo & Saddex Ka Dhacaya - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Kooxdii 1aad Ee Usoo Dallacday Premier League Xilli Ciyaareedka Dambe, Laba La Sugayo & Saddex Ka Dhacaya
Kooxda kubadda cagta Norwich City ayaa dib ugu soo laabatay horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League, iyadoo noqotay kooxdii koowaad ee xilli ciyaareedka dambe soo gelaysa.
Norwich ayay u tahay markii shanaad ee ay usoo dallacdo horyaalka Premier League, waxaanay riyadeedani u xaqiiqowday markii ay guul-darrooyin la kulmeen Brentford iyo Swansea oo dhibco ahaan kusoo xigay.
Kooxdan oo u degtay heerka labaad ee Championship-ka xilli ciyaareedkii hore ayaa si degdeg ah ugu soo laabatay heerka koowaad iyadoo kaalinta koowaad kaga jirta kooxaha heerka labaad, isla markaana taagan meel aanay cidina soo qaban karaynin xataa haddii laga wada badiyo kulamada u hadhay oo dhan.
Watford oo ku jirta kaalinta labaad ayay ka horreeyaan siddeed dhibcood ka horreysaa Watford oo kusoo xigta, ahna kooxda kaliya ee ka joojin karta in ay Norwich ay markii saddexaad ku guuleysato tartanka Championship oo ay laba jeer oo hore koobkiisa qaadday.
Waa markii ugu degdegga badnaa ee ay kooxi usoo dallacdo heerka koowaad xilli ciyaareedka oo socda tan iyo sannadkii 2004, waxaanay Norwich xaqiijisatay in ay ka mid noqoto kooxaha Premier League iyadoo shan kulan ka hadhsan yihiin dhamaadka xilli ciyaareedka.
Norway ayaa haysata 90 dhibcood oo ay ka urursatay 41 ciyaarood, iyadoo xilli ciyaareedkuna kusoo dhamaanayo 46 kulan, waxaana kusoo xigta Watford oo 82 dhibcood haysata, isla markaana si toos ah u iman karta Premier League haddii aanay soo gaadhin kooxaha ka dambeeya ee Swansea oo 76 dhibcood leh, Brentford oo 74 dhibcood haysata iyo Bournemouth oo 71 dhibcood leh.
Sida uu dhigayo sharcigu, labada kooxood ee ugu dhibcaha sarreeya ayaa si toos ah ugu soo dallaca horyaalka Premier League, halka afarta kooxood ee ku xigaana ay isreeb-reeb usoo geli doonaan oo midkood soo gudbi doonto.
Dhinaca kale, horyaalka Premier League ayay ka dhici doonaan saddex kooxood oo Championship u degi doona.